Siyaasi Axmed Cabdale oo Hambalyo u Diray Maalinta Shuhadada SNM ee 17-ka October – Horn Cable Tv
Siyaasi Axmed Cabdale oo Hambalyo u Diray Maalinta Shuhadada SNM ee 17-ka October
0	October 16, 2021 12:25 pm
Madaxweyne Farmaajo Oo Furay Shirka Wadatashiga Dowladda Federalka Iyo Maamul Goboleedyada Somalia
Sudan Oo Sheegtay Inay Dib Qabsatay Dhamaanba Dhulkii Ay Ka Heysatay Itoobiya
Somaliland Oo La Filayo In Imaaraadka Carabta U Dhoofiso 5,000 Neef Oo Adhi Ah
Baanka Dhexe Ee S.LAND Oo Hadda War-saxaafadeed Soo Saaray
Koox Caalami Ah Oo Dugsi Kubadda Lagu Barto Ka Hirgelisay Addis Ababa
Hargeysa, (HCTV) – Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Axmed Cabdala ayaa dhambaal hambalyo ah u diray Munaasibada Maalinta Geesiyaasha Qaranka Somaliland oo ah Xuska 37-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM.
Gudoomiyaha Xisbiga ayaa sheegay inay maalintani ka mid tahay in si weyn loo xuso oo waliba maalmaha fasaxa lagu daro isla markaana ku maalin qiimo weyn ku leh Shacabka Somaliland oo lagu tilmaamayo siday dhiigoodda iyo naftoodaba xoraynta dalka ugu hureen halgameyaashii SNM dagaaladii dalka lagaga xoraynayay xukunkii dhiig miiratadda ahaa ee Siyaad Barre.
Waxaan ilahay uga baryayaa in uu ka waraabiyo naxariistii janno inta dhimatay, inta noolna, umadda Somaliland waxa waajib ku ah in ay xurmo, xasuus iyo sharafba u hayaan dhammaan geesiyaashii naftooda u soo huray dalkeena”.
Ugu danbayn Guddoomiyaha Xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Somaliland Mudane: Axmed Cabdala ayaa tilmaamay in xurmo iyo xasuus aan duugoobayn ay bulshadda Somaliland u hayso halgameyaashii ku geeriyooday dagaalkii dalka lagu xoreeyay.
“Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan geesiyaashii naftooda, maalkooda iyo maskaxdooda u soo huray dalka, ee uu ugu dambeeyey halgankii hubaysnaa ee SNM, maalinta Xuska Shuhadada ee 17 October darteed. Waxaanu u haynaa geesiyaashaa dhammaantood xurmo iyo xusuus aan duugoobayn”.
Qarax Khasaare Gaystay oo ka dhacay Baledweyne
Taiwan oo ka jawaabtay weerar afka ah oo China ku qaaday Taiwan iyo Somaliland